Laba Daqiiqadood Iyo 2 Gool: Halyeygii Manchester United Ee Shinji Kagawa Oo Mar Kale Isku Qoray Buugga Taariikhda Kubadda Cagta - Cadalool.com
Laba Daqiiqadood Iyo 2 Gool: Halyeygii Manchester United Ee Shinji Kagawa Oo Mar Kale Isku Qoray Buugga Taariikhda Kubadda Cagta
Marka aad koox cusub ku biirto, kuna dhaliso goolkaaga ugu horreeya 20 ilbidhiqsi oo kaliiya, xaqiiqdii waxaad si buuxda isku bartay taageereyaasha naadigaaga cusub, marka aad mid labaad u dhaliso daqiiqaddii labaadna waxa aad noqonaysaa halyey hal kulan gudihii ku kasbaday quluubta jamaahiirta.
Arrintaas waxa sameeyey halyeygii Manchester United ee Shinji Kagawa oo toddobaadkan ku biiray kooxda reer Turkey ee Besiktas oo amaah uu ugaga wareegay Borussia Dortmund oo uu dib ugu laabtay markii uu soo afjaray waayihiisii Old Trafford.
Kagawa ayaa beddel kusoo galay ciyaartii kooxdiisu ay la lahayd Antalyaspor Axaddii toddobaadkan, waxaana uu soo dhex istaagay garoonka daqiiqaddii 81aad ee dhamaadka, hase yeeshee waqti badan kuma qaadanin inuu garoonka ka baxo iyadoo uu yahay halyeyga kooxda.
18 ilbidhiqsi oo kaliya markii uu garoonka ku jiray ayaa uu dhaliyey gool qurux badan, waxaana uu labaystay markii loo daayey laag-xor ah oo uu goolak ka toogtay masaafo 30 yard ah, sidaana waxa uu ku galay buugga taariikhda kooxda oo durba loo aqoonsaday ciyaartoygii goolashii ugu degdegga badnaa u dhaliyey.
Laacibkan reeer Japan oo ay da’diisu tahay 29 jir, ayaa waxa uu ka tegay Borussia Dortmund oo sannadkii 2012 uu ka caawiyey inay ku guuleysato horyaalka Bundesliga iyo German Cup ka hor intii aau tegin Manchester United, hase yeeshee sannadkii 2014 ayaa uu dib ugu laabtay.
Xili ciyaareedkan, waxa hawada ka saaray tababare Lucien Favre oo kaydka ku caajisiyey illaa ugu dambayn ay kooxdu go’aansatay in maalintii ugu dambaysay suuqa bisha January ay amaah ugu dirto Besiktas.